Unyana wam nguhypochondriac | Oomama Namhlanje
UAna L. | 14/05/2021 12:00 | Intsapho, ZeMpilo
Akukho lula ukuba nawuphi na umama ajongane nomntwana we-hypochondriac. Kwaye khumbula ukuba le meko ayilulanga kuye. Inkqubo ye- I-Hypochondriac abantwana bayayijonga le nto baziva ngayo. Babonisa ukukhathazeka okungaqhelekanga ngokubandezeleka, kuba abanye, inokuba yinto nje elula, isisu esibuhlungu okanye ingqele. Bahlala le meko noxinzelelo olunjalo kangangokuba baqala ukuba nenkolelo yokuba kukho into embi eyenzekayo kubo.
Kule nqaku siza kukunceda wena nomntwana wakho, kwaye sikubonise ezinye zeempawu eziphambili zehypochondria. Kodwa khumbula, umntwana wakho unokuba yi-hypochondriac, okanye inokuba ilahlekisa, kwaye wenza ngathi kukho ezinye iziphene. Ngamanye amaxesha i-hypochondria enxulunyaniswa nokuphazamiseka okunokubangela.
1 Oonobangela kunye neempawu zehypochondria
2 Uziva njani umntwana we-hypochondriac?
3 Iingcebiso zokukunceda ngomntwana wakho we-hypochondriac
Oonobangela kunye neempawu zehypochondria
Ngokuqinisekileyo asazi unobangela wehypochondria, kukholelwa ukuba kukho into ebangela oko, kusenokwenzeka nokuba umntwana ekuthethwa ngaye une-hypersensitive, okanye ukuba uye waya kumava esalamane esigulayo. Kukwanengqondo ukuba ukuba omnye wabazali okanye izihlobo ahlala nazo yi-hypochondriac, umntwana uyilingisa loo nto.
Olu hlobo lwesifo ibonakalisa ngakumbi emva kweminyaka esibhozo okanye esithoba ubudala. Ezinye zeempawu ezibonakaliswa ngumntwana wakho we-hypochondriac, kwaye onokuthi uqinisekise kukubaxwa kwiintlungu, inkolelo eqhelekileyo yokuba banesimo esibi, banengxaki yoxinzelelo, uloyiko.
Kwihypochondria inikwe ixabiso lesifo. Kuya kufuneka siyinike ingqwalaselo nokubaluleka okuyifaneleyo, kwaye sinike umntwana wethu izixhobo zokumnceda ukuba aphathe imeko. Sikucebisa thetha nogqirha wezengqondo. Ngokubanzi, unyango lokuziphatha ngokuziphatha luyasetyenziswa, ukunika isikhokelo kunye nokusebenza nomntwana kunye nosapho ukoyisa uloyiko lwabo, kodwa kukho abanye.
Uziva njani umntwana we-hypochondriac?
Nceda uqaphele oko Umntwana we-hypochondriac uhlala enexhala kunye ne-hyperactivity ejolise ekufumaneni izifo ezibeka impilo yakho emngciphekweni, okanye eyabantu abakungqongileyo. Gcina ukhumbula ukuba uhlala esoyika kwaye ephindaphinda uloyiko. Ngokwenyani, ixhala lakho ligxile kumngcipheko okanye kwisoyikiso esivela emzimbeni wakho, obonwa njengobuthathaka okanye ogulayo.
Ukusukela ukuba i-COVID-19 ifakwe kubomi bethu, uloyiko lokugula lonyukile. Abantwana abaqhelekanga kubo, uninzi lwamakhwenkwe kunye namantombazana baphila bexhalabile ngempilo yabo kunye neyezihlobo zabo. Uncedo kukuba ukhuseleko kunye neenkqubo zokhuselo kunye nokuba iimeko ziye zalawulwa ngakumbi kuncede abantwana be-hypochondriacal ukuba bazole.
Kubalulekile ukuba uyazi loo hypochondria iyanyangwa, iyancitshiswa okanye inyangeke, ke, ukugcina isimo sengqondo sokwenza into kunye nokujonga ukuba yinxalenye yobuntu bomntwana akumncedisi. Usapho, iingcali kwezemfundo kwaye, ukuba kukho imfuneko, inkxaso yobungcali zizinto eziphambili neziyimfuneko.
Iingcebiso zokukunceda ngomntwana wakho we-hypochondriac
Inyathelo lokuqala ekufuneka silithathile xa ukrokrela ukuba umntwana wakho uyi-hypochondriac nika ukubaluleka kweemeko zempilo yomntwana. Kuya kufuneka uphume ngaphandle, ngokundwendwela kugqirha wabantwana, ukuba akukho zimpawu zihambelana nesi sifo okanye isifo athi sinaso.
Nje ukuba ukuqinisekisile oko akukho sifo, qinisekisa umntwana ukuba akukho nto iphosakeleyo. Musa ukumnika iyeza, okanye i-placebo ukuba akayifuni. Ukuba uyawa, mxelele ukuba uphilile, akukho nto yenzekileyo kuye, ngokufanayo nemvula, ukuba uthe wamanzana kancinci akazukujika abe yinyumoniya. Njengomama kufuneka silungiselele ingqondo yakhe ukuba ibe ngumntu ozimeleyo nozinzileyo, ngaphandle koloyiko.
Sebenza naye kwinqanaba lezonxibelelwano imeko nganye evelayo. Zilolonge Isakhono sokuguqula iingcinga ezingalunganga zibe zizigqibo ezifanelekileyo. Zama ukwenza ukuba kwenzeke kwakhona. Umzekelo, unokumxelela ukuba ukugqibela kwakhe ukuva iintlungu akubalulekanga, ukuba kudlule ngokukhawuleza. Kwaye ngaphezu kwako konke, musa ukuwela kumgibe wokungamsi esikolweni. Ukuba awufuni ukuya, fumana ukuba kutheni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Unonophelo » ZeMpilo » Unyana wam ngu-hypochondriac
Unyana wam ulikhoboka leselula